Seychelles novoarin'i Black tamin'ny lisitra mainty
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Seychelles novoarin'i Black tamin'ny lisitra mainty
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Vao tsy ela akory izay dia nanao lisitra mainty an'i Seychelles i Frantsa noho ny fikirakirany ny sehatra ivelany. Saingy teo am-pandevonan'izao tontolo izao ny vokatry ny fanambarana dia misy anomalie maro hafa mivoaka avy any Eropa.
Amin'izao fotoana izao dia misy toe-javatra tsy manam-paharoa any Seychelles raha ny governemanta, etsy andaniny, dia manambara fa i Seychelles dia ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena ary firenena tena tsara hampiasaina amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany izany, fa etsy andaniny, nesorin'ny governemanta ny vahiny mpampiasa vola amin'ny fiarovana ara-dalàna rehetra.
Na izany aza, Seychelles dia nandray fepetra hanarenana ity olana ity:
Tamin'ny 27 novambra 2019, ny sampana mpanatanteraka dia nanapa-kevitra nandritra ny fivorian'ny kabinetra ho an'i Seychelles hanaiky ny fivoriamben'i New York momba ny fanekena sy ny fampiharana ny loka arbitraly vahiny an'ny 1958.
Nanaraka izany fotoana fohy ny Antenimieram-pirenena nosy nanamarina ity fanapahan-kevitra ity tamin'ny 10 Desambra 2019.
Saingy, eto no mijanona.
Taorian'ny nanambaran'ny Antenimieram-pirenena sy ny kabinetrany ny fahavononany hiaro sy hisarika ny fampiasam-bola any Seychelles, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny izay mila soniavina fitaovana fampitaovana ary hanome toromarika ny masoivohonany ao amin'ny ONU hametraka io fitaovana io, ary tsy miraharaha izany ezaka rehetra ataon'ny firenena izany. amin'ny fipetrahana fotsiny amin'ity fanapahan-kevitra ity mandritra ny iray volana mahery.
Mametra-panontaniana ny fianakaviambe iraisam-pirenena anio ny amin'ny fahatarana izay manamafy ny fahaverezan'ny fanajana an'i Seychelles ataon'ny vondron'ny mpandraharaha miaraka amin'ny tombontsoany amin'ireo nosy.
Tsy afaka mijanona i Eoropa mijery izany toe-javatra izany ary ny fanapahan-kevitr'i Frantsa farany teo dia nanakorontana olona manan-danja maro tao Seychelles. Very ny raharaham-pitsarana tany amin'ireo nosy noho ny tsy fankatoavana ny Fifanarahana tany New York tamin'ny 1958.
"Tokony ho mpandresy i Seychelles rehefa mihetsika hanaja ny fenitra sy ny hitsiny hoy ny mpisolovava monina any Frantsa.",